🥇 ▷ Kooxaha WhatsApp: sida looga jawaabo si gaar ah xitaa haddii aysan ku qornayn ajendahaaga ✅
Kooxaha WhatsApp: sida looga jawaabo si gaar ah xitaa haddii aysan ku qornayn ajendahaaga
Waxaa jirta hab aad fariin gaar ah ugu dirto qof aan ku jirin dadka aad la xiriirto, laakiin ka mid ah kooxahaaga.
Kooxaha WhatsApp-ka: waxay si gaar ah uga jawaabaan xitaa haddii aysan ajandahaagu ku jirin
Daqiiqada ugu dambeysa WhatsApp Waxay noqotay codsi muhiim u ah taleefankeena. Isticmaalkeeda ayaa kor u kacay adduunka oo dhan, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah bogagga ugu caansan soo dejinta.
WhatsApp Waxay na siisaa fursado badan oo kaladuwan oo lagula xiriiro dad kala duwan. Farriimaha qoran, farriimaha codka, emojis ama sawirro. Tilmaamo aad iyo aad u badan ayaa lagu daray si loo wanaajiyo khibradda adeegsadaasheeda.
Tallaabooyinka lagu wadaagayo waddamada WhatsApp sida sheekooyinka Facebook!
Laakiin inkasta oo ay taasi jiraan waxaa jira goobo dejineed oo toos ah oo aan gebi ahaanba raaxo lahayn. Mid ka mid ah waa suurtagalnimada inaad u dirto farriin khaas ah qof aadan ballansan.
Dhibaatadaani waxay dhalisay cabashooyin badan oo ka yimid dadka isticmaala WhatsApp maxaa yeelay mararka qaar ma rabno inaan jadwal u siino kuwa helaya farriimahayaga maxaa yeelay wada-hadalka wuxuu noqon karaa mid kedis ah Tusaalaha arintan ayaa ah xiriiri adeeg ama bilaabida wadahadal codsi qaas ah.
Shukaansi Facebook: sida barnaamijka cusub ee shukaansi uu u shaqeeyo
Si kastaba ha noqotee, ama waxa dad yaqaana ay ogyihiin inay suurogal tahay in la dhaafo qaabeynta WhatsApp. Tan darteed waa lagama maarmaan in qofka aan u dirayno farriinta uu koox nala wadaago.
Markaa waxay tahay inaan sameyno waa inaan galno wada sheekeysi kooxeed oo aan jawaab ka helno qofkaas. Marka halkaas aan dooranno waxaan furi doonnaa liis ikhtiyaar ah oo aan ku dooran karno shayga “ka jawaab si gaar ah”.
Khariidadaha Google iyo sawir malag ah oo lugeynaya wadada oo barakacay qof walba
Sidan ayaan u furi karnaa wadahadal shaqsiyeed nambarka aan qorsheysanay waana la xiriiri karnaa isaga oo aan isticmaalin kooxda guud.
WhatsApp Markii ugu dambeysay waxay sameyneysay cusboonaysiinta aaladdeeda tanna waxay ku sameysay sahanno adeegsadayaal adduunka oo idil ah.
WhatsApp-ka Shiinaha waa isku darka u dhexeeya Messenger, Instagram iyo tinder